स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई प्रवेशमा कडाई, सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोक्यो ! « News24 : Premium News Channel
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई प्रवेशमा कडाई, सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोक्यो !
काठमाडौं, ३१ बैशाख । बुधबार (आज)देखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकारहरुलाई मन्त्रालय प्रवेशमा कडाई गरेको छ । परिचय–पत्र देखाएर समाचार सङ्कलन गर्न मन्त्रालय प्रवेश गर्ने पत्रकारहरुलाई आजदेखि सुरक्षाकर्मीले गेटमै रोकेका जानकारी गराइएको छ ।
मन्त्रालयमा फोन गरेपछि मन्त्रालयबाट बोलाएमात्र जान पाउने गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुको भनाइ छ । जानकारी अनुसार आजको बैठकमा वरिष्ठ अधिकारीहरुले पत्रकारलाई नभेट्न र सुचना नदिन कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश पाउनका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटा र विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने जानकारी गराइएको छ । कोरोना संक्रमितहरुको संख्या ह्वात्तै बढेसँगै मन्त्रालय प्रवेशमा कडाई गरेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले दिनमा १ पटक गर्ने नियमित अपडेट बाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना दिन कडाइ गरिएको जानकारी गराइएको छ ।